လုံခြုံစွာအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို | အဆိုပါ USAHello | USAHello
ကခက်ခဲသင်တစ်ဦးစတိုးဆိုင်ရဘို့ဖြစ်၏? သငျသညျစျေးဝယ်သည့်အခါတွင်သင်သည်ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိသည် Do? USA တွင်, သင်အွန်လိုင်းသင်လိုအပ်နီးပါးအရာအားလုံးကိုဝယ်နိုင်. အစားအသောက်နှင့်အခြားနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများကိုများအတွက်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဖို့အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲကိုလေ့လာပါ. သင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေစဉ်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သင်ဝယ်ချင်သောကို item ၏အမည်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုအပေါ်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးမလုံခြုံ site ပေါ်တွင်တက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ,. အစား, လုံခြုံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနေသောသင်ယူသူတို့ကိုအသုံးချ. သငျသညျအများအားဖြင့်အများဆုံးအကျွမ်းတဝင်အမည်များနှင့်ကျော်ကြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များယုံကြည်စိတ်ချနိုင်. သူတို့ကအထူးအစားအစာထုတ်ကုန်ရှိသည်ကြောင့်သင်တို့မူကားငယျဆုံးသော-လူသိများဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုချင်စေခြင်းငှါ. ဒါကြောင့်, သငျသညျသစ်တစ်ခု website ကိုမှဘာမှမပေးဆောင်မတိုင်မီ, ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံလျှင်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေး.
တစ်ဦးစျေးဝယ်က်ဘ်ဆိုက်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်လုံခြုံလျှင်သင်အထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမည်နှင့်ထို့နောက်စကားလုံးရိုက်ထည့်ပါ "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ " သင်အခြားအသုံးပြုသူများကြောင်း website ကိုစဉ်းစားသောအရာကိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်.
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ရှိပါက, ကလွယ်ကူအွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါ. ဒါဟာဒက်ဘစ်ကဒ်ထက်တစ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလုံခြုံပါသည်. ခရက်ဒစ်ကတ်များသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံချိတ်ဆက်မထားပါ. ကဒ်အရေအတွက်အားခိုးယူလျှင်, သူခိုးကိုသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့မရနိုငျ.
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိပါက, သင်ဆဲအွန်လိုင်းဝယ်နိုင်. သင်တစ်ဦးကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်. သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့တူဂဏန်းရှိပြီးတစ်ကဒ်ဝယ်နိုင်. ပိုက်ဆံအစုတခုငွေပမာဏကဒ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်. ငွေကိုထုတ်ပြေးလာသောအခါသင်ပိုမိုပိုက်ဆံထပ်ထည့်သို့မဟုတ်တစ်ကဒ်အသစ်ရနိုင်. သငျသညျအရာများအတွက်ပေးဆောင်သည့်အခါဤအသင်သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်မလိုပါအွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်လုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သငျသညျပိုက်ဆံမဝယ်သို့မဟုတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာသင်ကအခကြေးငွေပေးချေမည်. အကောင်းဆုံးကိုသဘောတူညီချက်ရဖို့မတူညီတဲ့အပေါ်အခကြေးငွေနှိုငျးယှဉျ. စားသုံးသူ Reports.org ထံမှထောက်ခံအုကူံပကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များကိုရှာပါ.
သင်လုပ်နိုင်သည် Paypal အကောင့်ဖွင့်လှစ် အဲဒီမှာကနေအွန်လိုင်းငွေပေးချေ. သင်တစ်ဦးပုံမှန်အစည်းအဝေး Paypal အကောင့်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ်. သို့မဟုတ်, သင်တစ်ဦးရနိုင် paypal Mastercard prepaid ဘဏ်အကောင့်မရှိဘဲ.
အရာအားလုံးသည်သင်၏အိမ်သို့စေလွှတ်တော်မူသောကွောငျ့အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အဆင်ပြေ. သင်ကဝယ်ခင်သင်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဖို့မရကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတိထားပါရန်ရှိသည်. သင်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်မူရင်းထုပ်ပိုးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းမသုံးခဲ့ကြပါလျှင်သင်ကပြန်လာနိုင်မဝယ်ခင် Check. လည်း, ပြန်ရေးမူဝါဒသည်အဘယ်အရာကိုမြင်စစ်ဆေး. တချို့ကက်ဘ်ဆိုက်များကိုအခမဲ့ပြန်ပူဇော်, အခြားသောသူတို့သည်သင်တို့ထံရေကြောင်းများအတွက်ပေးဆောင်စေမည်နေစဉ်.
URL ကိုမှာဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်မှာမျှော် (https ကိုစတင်သည်သောစာမျက်နှာလိပ်စာ://). သင်ကလိပ်စာဘေးမှာအနည်းငယ်သော့ခလောက်သင်္ကေတကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးစျေးဝယ် site ပေါ်တွင်တဲ့အခါ, ဆိုက်ရဲ့နာမညျကိုလာမယ့်ကဖို့သော့ခလောက်ရှိပါတယ်သိမြင်ဖို့ကြည့်. "https" နဲ့သေချာ URL ကို site ရဲ့လိပ်စာစတင် Make, အစားမယ့် "http" ၏, နှင့် URL ကိုလယ်ပြင်၌တစ်သော့ခလောက်အိုင်ကွန်ရှိပါတယ်. ကအခြားသူများကြားဖြတ်မရနိုင်ဒါကြောင့်ဒီအသင့်ဒေတာဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံကြောင်းကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်အဲန်ဂျီအိုများမှ encryption ကိုအသုံးပြုသည်. လည်း, သူတို့ရဲ့လိပ်စာများအတွက်စာလုံးပေါင်းအမှားသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့သဒ္ဒါရှိသည်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များများအတွက်မြျှောပျေါမှာရှိ. သူတို့ကတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် copycat ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆိုင်မှပိုမိုလုံခြုံပါသည်. shared ကွန်ပျူတာများ, တစ်ဦးစာကြည့်တိုက်အတွက်နဲ့တူ, သငျသညျအကွောငျးကိုမသိရပါဘူးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိစေခြင်းငှါ. သင်တို့သည်လည်းလာမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့စေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်အခြားလူများထံသို့ထိုင်လျက်စေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦး shared ကွန်ပျူတာပေါ်မှာစျေးဝယ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျအရာတစ်ခုခုဝယ်ဖို့စဉ်ဘယ်သူမှသင်စောင့်ကြည့်ကြောင်းသေချာအောင်. သငျသညျဝေးလမ်းလျှောက်မတိုင်မီသင့်အကောင့်ကနေ log out လုပ်ဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ. အကယ်. မရ, တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူဖို့နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်.
MacAfee ရဲ့ 10 ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းနေဖို့အကြံပေးချက်များ
ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဘို့ကို PC Mag ရဲ့အကြံပေးချက်များ